Inzuzo yamasheya kanye namaphesenti ashintshwa kwimali engenayo ngayinye uma kuqhathaniswa nonyaka odlule wezinkampani ezivela emhlabeni jikelele.
Kusuka kuwo wonke umhlaba Iziwe Ezihlangene NMS (NASDAQ) NYQ (I-NYSE)
Usuku lombiko wokugcina
Ukuzuza nge-share ngayinye ▼
Imali ngayinye ezuzwa ibalwa ngokuhlukanisa imali engenayo (noma inzuzo) ngenani lamasheya enkampanini.
Shintsha unyaka %
1. Toyota Motor Corporation inzuzo ngayinye ngayinye
2. ORIX Corporation inzuzo ngayinye ngayinye
3. KB Financial Group Inc. inzuzo ngayinye ngayinye
4. Brookfield Property Partners L.P. inzuzo ngayinye ngayinye
5. Shinhan Financial Group Co., Ltd. inzuzo ngayinye ngayinye
6. Koninklijke Philips N.V. inzuzo ngayinye ngayinye
7. Honda Motor Co., Ltd. inzuzo ngayinye ngayinye
8. SK Telecom Co., Ltd. inzuzo ngayinye ngayinye
9. Tata Motors Limited inzuzo ngayinye ngayinye
10. Vedanta Limited inzuzo ngayinye ngayinye
11. ING Groep N.V. inzuzo ngayinye ngayinye
12. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. inzuzo ngayinye ngayinye
13. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inzuzo ngayinye ngayinye
14. News Corporation inzuzo ngayinye ngayinye
15. Nomura Holdings, Inc. inzuzo ngayinye ngayinye
16. Mizuho Financial Group, Inc. inzuzo ngayinye ngayinye
17. Banco Santander, S.A. inzuzo ngayinye ngayinye
18. KT Corporation inzuzo ngayinye ngayinye
Imali etholwa esitokisini - lokhu kuyinkomba enkulu yempumelelo yenkampani. Lapho uthenga amasheya, abatshalizimali batshala imali ekuthuthukiseni inkampani, bese inkampani, yenza inzuzo, ikhombisa ukuthi yonke inzuzo isatshalaliswe kanjani ngokwabelana ngakunye.
Inkonzo yethu "Imholo evela ezitokisini zomhlaba" i-allstockstoday.com iqoqa futhi ibala izici ezinjalo:
Imali etholwa esitokisini sezinkampani eziku-inthanethi
Inzuzo yezitoko zomhlaba wonke namuhla
Shintsha emiholo yenkampani ngayinye manje
Amandla wenzuzo yesitoko yenkampani uma iqhathaniswa neyangonyaka odlule
Usuku lombiko wenkampani ngenzuzo. Usuku lokugcina lwanamuhla.
Inani lenzuzo ngesabelo senkampani ngayinye
Shintsha kwinzuzo yesitoko yonyaka
Inzuzo yesitoko se-Intanethi
Imali etholwa ezitokisini zezinkampani eziku-inthanethi - isimilo esivela kwimithombo yomphakathi ezitatimendeni zezimali zezinkampani.
Inzuzo evela kumasheya enkampani inani lenzuzo ekhonjisiwe yenkampani kumadokhumenti wokubalwa kwezimali. Musa ukudida inzuzo ezitokisini zenkampani ngenzuzo kusuka kuzinguquko entengo yamasheya enkampani emakethe yesitoko.
Izimali ezivela kumasheya enkampani zishicilelwa kanye ngesikhathi sokubika, njengomthetho, le yingxenye yokubalwa kwezimali. Ngokuya ngomthetho wezwe lapho inkampani isebenza kuyo, izikhathi zokubonisa inzuzo yezinkampani zingahluka.
Ukuzuzwa kwesitoko sezinkampani zomhlaba wonke namuhla kungumsebenzi wokufingqa wesiza sethu lapho ungabona khona imali yamuva yenzuzo (yesikhathi sokubika sokugcina).
Imholo ngesabelo ngasinye - leli inani lemali lenzuzo lenkampani elihlukaniswe ngenombolo yamasheya inkampani enayo.
Ngakho-ke, inzuzo yenkampani ngengxenye ngayinye iyinkomba yesilinganiso senani lenzuzo etholwe imali etshaliwe.
Imali etholwayo ngesabelo ngasinye namuhla iyinkomba elula yokuqhathanisa ukusebenza kwezinkampani ezahlukahlukene esikhathini esisodwa sezimali.
Ushintsho ekutholweni kwemali yenkampani ngesabelo ngasinye manje libonisa isilinganiso sokuthi imholo ngalinye labelana ngakuphi inkampani manje liqhathaniswa nokwakungonyaka owedlule.
Ushintsho kumholo lwenkampani ngesabelo ngasinye luboniswa njengephesenti. Uma ushintsho lwemali etholwayo ngesabelo ngasinye luphezulu kunonyaka owedlule, leso sibalo sikhonjiswa luhlaza. Uma imali etholwa isabelo ngasinye namuhla ingaphansi kwezinyanga eziyi-12 ezedlule, khona-ke iphesenti iboniswa obomvu.
Uma kuqhathaniswa nonyaka owedlule, amandla ashukumisayo enzuzo yesitoko senkampani kungenye yezimpawu eziphambili zokuphumelela kwenkampani.
Amandla enzuzo akusona ukuphela kwenkomba yokusebenza kahle kwenkampani. Ezinye izinkampani zingakhombisa inzuzo encane ngemali, kepha zikhulise imali ngokuthenga kwamasheya noma ngokuthengwa kwezimpahla nentuthuko.
Amandla wenzuzo yenkampani ngesabelo ngasinye abonisa kuphela imali engenayo evela kwizitatimende zezezimali, ngaphandle kwezinye izimpahla zenkampani.
Noma kunjalo, ukukhula ngamandla kwezimali inzuzo unyaka nonyaka kubatshalizimali ukuthi inkampani ikhula ngokuqhubekayo futhi ibiza kakhulu.
Usuku lombiko wale nkampani ngenzuzo, usuku lokugcina lombiko liyinkomba yokubhekiswa kulo, usuku okwabekwa ngalo umbiko wezimali ngenzuzo yenkampani.
Usuku lwesitatimende somholo luvame ukusethwa ezingeni lomthetho wezwe lapho inkampani isebenza khona. Kepha inkampani uqobo ingaguqula usuku lokugcina lokubika ngenzuzo ngaphakathi kwemikhawulo esungulwe ngumthetho.
Kwezinye izici zemakethe yesitoko, kwesinye isikhathi usuku lwesitatimende senzuzo yenkampani lungathinta isimo senkampani.
Ungabona usuku lombiko wenzuzo yenkampani ngayinye etafuleni lethu le- "stock inzuzo".
Inani lenzuzo ngengxenye ngayinye yenkampani
Inani lemali etholwayo ngesabelo senkampani ngayinye yenkampani yemakethe yamasheya yomhlaba iboniswa kukholamu ehlukile yetafula lethu lokufingqa lokubuyiselwa kwesitoko.
Inani lenzuzo libalwa njengenzuzo ephelele yenkampani, ihlukaniswe ngenani lamasheya.
Ikholomu yemholo ezenzakalelayo ngesabelo ngasinye ihlelwe ngokuzenzakalela ukusuka kokukhulu kuya kokuncane. Ngakho-ke, ngokushesha ubona izinkampani eziphezulu ezizuzisa kakhulu.
Ukushintshwa kwenzuzo yesitoko sonyaka yisilinganiso esilinganiswayo semali etholakalayo ngesahluko sanamuhla senzuzo etholwayo ngokuhlanganyela ngakunye ngonyaka edlule.
Ushintsho lwemali etholwayo ngesabelo ngasinye sonyaka luboniswa kwikholomu yokugcina yetafula lethu.
Ukuguquguquka okuhle kwemali etholwayo ngesabelo ngasinye kuboniswa ngamaphesenti aluhlaza.
Imali etholakele ngesabelo ngasinye, ngokulandelana, izoba bomvu.
Ukushintshwa kwemali etholwayo ngokwesabelo senkampani ngayinye yonyaka kuyisici esenziwa isikhathi eside senkampani. Kubalulekile ukuqonda ukuthi izinkampani ezinkulu ezidayisa amasheya wazo ngokushintshaniswa kwesitoko, njengomthetho, zibheka ukubikwa konyaka kwenzuzo ezinhlelweni zazo zebhizinisi.